Indlu ye-Joy - Igumbi lotshani - I-Airbnb
Indlu ye-Joy - Igumbi lotshani
Sapa, Sa Pa, i-Vietnam
Ikamelo e-indawo esepulazini ibungazwe ngu-Scott
U-Scott uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Scott izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
IJoy House itholakala esigodini saseGiang Ta Chai, eduze kwempophoma yaseCau May, cishe amakhilomitha ayi-10 ukusuka edolobheni laseSapa. Indawo yethu iyinhlanganisela yezindlu zendabuko zabantu abambalwa bakwa-H'Mong nabakwa-Tay ezweni elifanayo, lokho kwakha isakhiwo esivumelana nemvelo lapho sizungezwe imvelo kuphela enentaba, impophoma, umfula, ihlathi loqalo kanye namasimu elayisi.
Zinike ithuba lokuphumula phakathi kwemvelo, ujabulele isiko ngokuhamba nabantu bendawo futhi ujabulele imifino yethu emisha yasekhaya.
Indaba yethu ayigcini nje ngokuhlala ekhaya.
Abanye abantu basibuze ukuthi senzeni ukuze sizijabulise ebusuku?
Bangane abathandekayo, ngokweqiniso impendulo ithi: akukho lutho!
Indlu yethu ayiyona indawo yezokuvakasha ... Indawo yethu imane nje iyizwe elinezindlu ezincane ekugcineni kwedolobhana, elizungezwe izintaba, izimpophoma, amasimu elayisi kanye nomfudlana ogeleza phambi kwendlu.
Indawo yethu ngeyalabo abafuna ukuzola nokuphumula futhi abafuna ukubalekela ukuphithizela kwedolobha.
Uzoba nezikhathi zasekuseni ezipholile ngekhofi elishisayo nezingoma zezinyoni ezinkeneneza ezintabeni.
Uzoba nokuhamba kancane emini emigwaqeni yasemakhaya nezingane zasendaweni.
Uzoba nokushona kwelanga kothando ngasemfuleni nasezintabeni.
Uzoba nesidlo sakusihlwa esinezithelo nemifino ethathwe ehlathini noma izingadi zabahlali.
Uyoba nendawo enokuthula yezintaba namahlathi nenyanga nezinkanyezi, umsindo wemimoya nezimvula ezisheshayo eduze komlilo wekamu,
Futhi singacula futhi sabelane ngezindaba zethu, esingazange sibe namathuba okuxoxa ngezinsuku ezimatasa... umhlaba wangempela wokuhlangana.
Sinezinja ezi-4: i-Hong, i-Tuyet, i-Huong ne-Dao. Bayakuthanda ukugijima futhi badlale nezingane zasendaweni, kusenze sikhumbule isikhathi sethu sobuntwana ngaphandle kokukhathazeka, siphila ngendlela elula nenjabulo elula.
Uyemukelwa ekhaya, kuzo zonke izinyathelo, kuwo wonke umoya.
4.79 out of 5 stars from 165 reviews
4.79 · 165 okushiwo abanye
Indawo yethu yokuhlala iyingxenye yedolobhana kanye nomphakathi wakwa-H'mong, umakhelwane wethu ongabantu bakwa-H'Mong banobungane kakhulu futhi bayakuthanda ukukhuluma nesivakashi, futhi banendaba enzima kakhulu.
Iningi labantu bohlanga esigodini sakithi naseSapa badla imbuya ngothi okusho ukuthi abanayo imisebenzi yokuhola imali enhle. Into abangayenza, wukuzama ukudayisa izinto zezandla ukuze benze imali encane yokondla imindeni yabo.
Ukuhlala e-Sapa, ungase uzungezwe abantu bendawo bendawo ngezinye izikhathi ngokuthengisa izinto zezandla, uma ungafuni ukuthenga, vele uthi Cha futhi ngeke baphinde bakuhluphe.
Futhi izingane, ziyakuthanda ukudlala edolobhaneni nasekhaya lethu. Futhi bathanda ngempela ukudlala nesivakashi. Sithemba ukuthi izingane zingakulethela ukumamatheka kwenjabulo ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Ukuhlala e-Joy House, sithanda ukunikeza izivakashi zethu ithuba lokuzwa isiko langempela lendawo, hhayi njengehhotela / indawo yokuphumula.
IJoy House isingathwe abantu bendawo, ngakho-ke ngesikhathi sokuhlala kwakho, ungangabazi uma udinga usizo oluvela kithi.
Noma vele uxoxe futhi wabelane nathi ngezindaba zakho :)